China Truss welded site na nkuku ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Honghua
Truss welded site n'akuku
A na-ejikarị ihe eji eme ụlọ na-ezo aka n'ụdị ụlọ ndị e ji ígwè rụọ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ụlọ ọrụ obodo, dị ka ogwe osisi kreen, Bridges na ọnụ ụzọ ámá hydraulic, wdg. Kindsdị pylons niile, dị ka elu mast, ụlọ elu telivishọn na ụlọ ntanetị
A na-ejikarị ihe eji eme ụlọ na-ezo aka n'ụdị ụlọ ndị e ji ígwè rụọ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ụlọ ọrụ obodo, dị ka ogwe osisi kreenu, Bridges na ọnụ ụzọ ámá hydraulic, wdg. A na - ejikarị ụdị pylons dị iche iche, dị ka ụlọ elu mast, ụlọ elu telivishọn na ụlọ elu akara ntanetị, nke a na - ejikarị arụ ọrụ igwe nwere oghere atọ, anọ ma ọ bụ ọtụtụ ụgbọ elu.
E nwere ike ịgbanye ihe eji arụ ọrụ nchara nchara, kwachaa ya, kpọchie ya ma ọ bụ dọkaa ya. Eldgbado ọkụ bụ ndị kasị n'ọtụtụ ebe; A na-ejikarị njikọ ndị ejikọtara ọnụ na-ewepu ihe owuwu, pylons na sistemụ nkwado; A na-ejikarị njikọ dị elu emechi njikọ njikọ saịtị nke trusses ígwè dị arọ. Riveing ​​arọ nchara rịrị elu nke ejiri nnukwu ọrụ siri ike ejiri nwayọọ nwayọọ dochie njikọ bolt.
Otutu-ala elu ịrị elu ígwè Ọdịdị nkwari akụ / ọrụ / shopping mall / azụmahịa / nkwakọba ụlọ, ndụ ibu na ndị nwụrụ anwụ ibu nwere ike na-eso ahịa chọrọ chepụta na gbakọọ. N'ihi na nke a ngo, na flooring na-grouped site flooring ígwè doo & purlin & ígwè oche & ihe. A na-achịkọta steepụ ahụ site na H ngalaba nchara kọlụm & ọwa nchara ígwè & ihe ntanetị ígwè. Anyị na-enye ọrụ n'efu maka ịkụzi ọzụzụ na China, na iji mejuo ihe ndị ahịa chọrọ maka ngwa ngwa ngwa ngwa, anyị nwere ike izipu injinia na saịtị ọrụ maka ntinye ndu.
Steel Ọdịdị ụlọ bụ otu ụdị nke prefabricated ụlọ, ma dum ígwè etiti na cladding ihe niile imecha ationgha, gụnyere ọnwụ, mkpọpu ala, shaping, nzukọ, ịgbado ọkụ, iguzogide nchara, sere na mbukota. All nchara òtù ejikọrọ site bolt ma ọ bụ ịghasa ma ọ bụ ntụtụ, wdg ngwa ngwa echichi na gburugburu ebe obibi.
Steel nkwakọba ụlọ bụ otu ụdị ígwè Ọdịdị. Steel Ọdịdị oru ngo bụ nke atọ emana ewu. Ọ na-agwakọta ngalaba H na akụkụ c / z n'ime etiti ya na mpempe akwụkwọ nchara akọwapụtara ma ọ bụ panel sandwich dị ka wal na ụlọ. Omenala a wuru ewu ihe owuwu a ụdị ebe a na-ewu na mepụtara contries. O nwere otutu oru ndi mara nma dika ibu, ibu kariri, obere uzo, ugwo ala, obere ntọala, obere usoro ulo, nchebe, mara mma, na ndi ozo. Ọ na ọtụtụ-eji otu ulo oru mmepụta ihe, nkwakọba, azụmahịa ewu, ụlọ ọrụ, na-adọba ụgbọala nza, obibi, multi-layered elu ụlọ na na.
Nke gara aga: Truss welded site akụkụ anọ tube
Osote: Ọdịdị pụrụ iche